Izifundo zasimahla ze-AutoCAD 3D -Hlaziya kwakhona iMicrostation V8i 3D -Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Izikolo ze-AutoCAD ze-3D zama-Free-Revit - Microstation V8i 3D
Namhlanje i-Intanethi ikufuphi, ukufunda akusengombandela. Ukusuka kokwazi ezo algorithms awuzange wazi ukuba zikhona ekwakheni ityhubhu yeRubik kwisikolo esiphakamileyo ukuthatha iikhosi ze-AutoCAD zasimahla kwi-Intanethi.
Ukubaluleka kohlobo lwe3D
Siyazi ukuba ikamva le-CAD likwimodeli eyaziwa ngokuba yi-BIM. Umahluko usekwamukelweni kwetekhnoloji kuyilo lwezixhobo.
Ekuqaleni, i-CAD ifuna ukwenza oko kwakusele kusenziwa ngephepha kunye neepensile. Kungenxa yoko le nto imiyalelo izamile ukuphinda-phinda into esiyenzileyo ngezixhobo zemigaqo (irabha, ikhampasi, iirula, itemplate, njl. Ngale ndlela izicwangciso ezifunwa ngumakhi zitsaliwe, izicwangciso zokwakha kunye nokusikwa okulindelweyo, kusetyenziswa okunamandla kuyilo loyilo kunye nolwakhiwo olulandelayo; yiyo loo nto igama elithi AEC.
Kodwa imeko elandelayo yayiyimodeli ye-3D. Ke ukuba iinqwelomoya zokusika zaphuma ngokuzenzekelayo kwaye zatshintsha; oku kuphunyezwe kuphela ukuba umsebenzi ubugxile ekwenzeni izinto zokwenyani hayi imigca ebameleyo. Yile ndlela yokuvela kwengcinga ye-BIM, ifuna ukumisela mgangatho indlela yokubiza izinto kwisimulation, hayi kuphela kuyilo, ubunjineli nolwakhiwo kodwa nakwinkqubo elandelayo (AECO).
Kule ndawo, iiplani ezahlukeneyo; AutoDesk, bentley, Solidworks, Rhino ukunika imizekelo. Zonke zifuna ukudibanisa iinkalo ezahlukeneyo kumjikelo weziseko zophuhliso; iinjineli zoomatshini, oochwephesha bombane, abavavanyi, abaqulunqi bezakhiwo, abakhi bezakhiwo ... ngokufanayo noko besikade sikwenza ephepheni, kodwa ngoku ziimodeli zedijithali.
Ukufunda ukusebenzisa ezi zixhobo kukufaneleka komsebenzisi ngamnye, nokuba uyila, ukhangele okanye uwakhile; kwaye ekuphenduleni kubasebenzisi abambalwa abacela uncedo, nantsi ikhonkco kwiikhosi ezijoliswe kwi-BIM ezinikezwa yi-Infinite Skills.
I-Infinite Skills kunye nezifundo zayo zamahhala ze-AutoCAD 3D
Ngaphandle kokunikezelwa kwezinto eziphathekayo ezifumaneka kwesi siza kukho iividiyo ze-900 zeemveliso ezivela kwi-2010 ukuya kwiinguqu ze-2014 zezi nkqubo zilandelayo:
I-AutoCAD yombane 2014
I-AutoCAD Sheet Ifayile
Ukongezelela, iikhosi zinokuthengwa kwiDVD ukuze zifumane iimeyile eziqhelekileyo.
BakwisiNgesi, kodwa ukuba umntu wayekhangela iikhosi zesimahla ze-AutoCAD, iMicrostation V8i 3D okanye uVuselela ... nantsi indawo.
Izakhono ezingenasiphelo Iikhosi ze-AutoCAD zama-3D
Uthelekiso lweGPS - iLeica, iMagellan, iTrimble kunye neTopcon
Ubhaliso oluvulekileyo lweeveki zeWinternGEO Webinars
jam i inzala kunye neprogram yokuphinda ibuyele, i-nese kdunde i-dhe kohenti yinto ephathekayo
Hallo. Ukusebenzisa i-pagina kwi-intanethi kwi-intanethi ye-intanethi, udibana ne-betaalbare prijzen.
Uza kuphinda uhlaziywe kwi-intanethi kwi-intanethi ye-intanethi ye-hier volgen hoe iie kan ndincede
I-Pershendetje, interesohem nge-kursin e Revit?
Sudhir s chavan uthi:
I-आटोकॅड मनापासून शिकण्याची इच्छा होती ती पूर्ण होईल.
Eric Garcia uthi:
Sawubona, ngokuhlwa, ndiyakhathalela ukuthatha i-MicroStation ikhosi njengoko ndiyakuthatha okanye apho, mbulela uEric
Ndingathanda ukuba nolwazi olungakumbi malunga nezifundo ze-microstation
Ewe, ngu-ostia dude.
Sawubona, ndifumanisa iikhosi ezinomdla kakhulu. Ndiya kukuxabisa ukuba uya kubathumela kwi-imeyile yam. Siyabonga!
Asisebenzeli nayiphi na inkambo ye-Microstation. Sibhala nje eli nqaku.
UGerardo Sánchez uthi:
Ndiyakhathalela ukuthatha inkqubo ye-Microstation V8i 3
Ngaba unganinika ingxelo?
Ingqalelo yakho, siyabonga
Uyabona ubusuku obuhle bubulelo ngenxa yale ndawo ndiyithanda kakhulu kwinkqubo ye-microstation Ndiyathemba ukuba unokunceda ndibulele
Ivan carveny bravo uthi:
Ndifuna ukwazi ukuba ndingabhalisa njani kwiklasi enzulu ye-microstation kunye ne-software yoluntu, kodwa i-microstation ephambili! Kukho naziphi na izizathu okanye izimvo zoncedo zamukelwa kakuhle kwaye ziya kuba zikarhulumente. Ndiyabulela kwangaphambili.
melva atencio uthi:
Ijongeka intle, inomdla kwaye iluncedo kakhulu kuthi bethu abayifunayo emsebenzini wethu wemihla ngemihla, nceda ndingathanda ukuyithumela kwi-imeyile yam nceda…
Luis Tunjano uthi:
Ikhosi ye-autocad iluncedo kakhulu ... enkosi
Francisco Abel Pauline uthi:
Ndingathanda ukwazi ukunandipha lo mbandela uya kuvuyisa
JUAN RAMON PILA uthi:
Izinto ezintle kakhulu, ukuba kunokwenzeka ukuba ndiyayithumela kwi-imeyile yam
UROBERTO HERRERA uthi:
FUNA UKUQHUBA I-CIVILACAD I-SANITARY COURSE, NGEZIFUNDO ZAMANZI NEZIHLOKO
nceda, ikhosi ibukeka kakuhle, nceda uyithumelele nge-imeyile.
Into efanelekileyo kakhulu endifuna ukuyithumela kwi-imeyile yam.
hector ulahle uthi:
I-Exelentes iikhosi ezinomdla kakhulu ezinokubonga ngokuzithumela kwiimeyile zam ziza kuncedisa
Itekhnoloji yeNdlela yeTekhnoloji eSpain kunye nezoBunjineli boLuntu e-China kwiminyaka nje eyi-4